Yiziphi izinhlobo zezicathulo okufanele zigqoke entwasahlobo ka-2015 kubesilisa nabesifazane. Izicathulo eziphathekayo, Spring 2015
Izikhwama ziyisitho esiyinhloko sezigidi zabalandeli bezimfashini zezemfashini emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, bobabili abesilisa nabesifazane abalandela ngokucophelela ikhabethe labo sebevele befunda isihloko esithi "Iziphi izicathulo ezizogqoka entwasahlobo ka-2015". Ngemuva kwalokho, ngeke ube nesikhathi sokubukela emuva njengoba kufika uMashi bese ubuza konke ukukhathazeka mayelana nokuqukethwe kwamashalofu wakho.
Yiziphi izinhlobo zezicathulo zabesifazane okufanele zigqoke entwasahlobo ka-2015. Amathiphu wokwakha
Mhlawumbe, ukuhlukahluka okunjalo kwemibala, imibala kanye namamodeli kuzoba nomona ngisho nakwezinye izindawo ezikude kakhulu namadoda atholakalayo. Emva kwakho konke, abesifazane babo bazoba nezikhetho ezinkulu kunazo zonke emthonjeni.
Amabhuzu e-Ankle nama-boots aqoshiwe. Ngokuqhubekayo, i-"tractor sole" eyaziwayo "ingatholakaliswa" ezinkundleni ezihamba phambili, futhi ezinhlanganisweni ezingenakwenzeka. Isibonelo, nge-sarafans yabesifazane noma i-skirt eqinile-ipensela. Ingabe uthanda ukuhlanganisa ukungaboni kahle nokuhlola ngamaqoqo? - Khona-ke ngu-100% umkhuba wakho!
Iziphi izicathulo ezifashisayo entwasahlobo ka-2016, isithombe
I-Classic Classic. Izinwele zezinwele ezithandwayo nezicathulo ezihle "mary jane" - yini engaba mnandi nakwesifazane? Akumangalisi ukuthi isithende sezithende ezenzakalweni zemfashini sasingaziphazamiseki.
Inyoka iphrinta. I-reptile yokukhohlisa nokukhohlisa iyaqhubeka inqoba izinhliziyo ezifashini. Amabhuzu, izikhumba zama-ankle kanye nezicathulo ezinokuphrinta izinyoka noma isikhumba salo mhlaba wezilwane eziphambene nakanjani kuzoba phakathi kwezintandokazi ze-fashion spring ezayo.
Amasinebe kanye namasinki. Uma lokhu, ngisho nasesikhathini esedlule nje izicathulo zemidlalo, namuhla unikeza "ukukhanya okuluhlaza" ngisho nekhanda elidumile leChanel - kuwukuhlakanipha ukuthenga i-pair of sneakers entwasahlobo. Phela, ukugqoka izicathulo ezikhululekile kunazo zonke emhlabeni kungaba nezindleko zebhizinisi, nezingubo zokuhlwa, kanye nejee zakho eziyizintandokazi.
Iziphi izicathulo zamadoda ezeluleka ukugqoka abakhiqizi entwasahlobo ka-2015
Abashayeli kanye namaswidi. Uma i-fashionista ngokuzumayo inombuzo: "Yini okufanele ugqoke izitebe zakho ezizithandayo entwasahlobo ka-2015?", Izitayela nabadwebi bazoxazulula kalula le nkinga. Gqoka izicathulo zezemidlalo ngezigqoko zesitayela ze "kazhual", futhi ngezingubo zakudala nezembatho ezihlanganisiwe ezihambisana nama-sweaters nama-jeans. Lokhu kuzokwenza kube lula ukuthinta umnsalo, ngaphezu kwalokho, ezinjalo izicathulo kuyamnandi futhi kulula ukuhamba ngezinyawo.
Oxfords Zasendulo. Ama-dandies eqiniso, izicathulo zesiNgisi ze-Oxford ziyingxenye ebalulekile yesithombe. Babheka ngokungacacile ngezimpahla zebhizinisi zakudala, okusho ukuthi kuyindlela ephephile yokwenza amadili amakhulu, izingxoxo zebhizinisi nokuphuma.
Ingxube yezinhlobonhlobo nemidlalo. Abagibeli bezimpahla zokugqoka amadoda - kuyisibonelo esithakazelisayo sezicathulo zesiNgisi emigqabeni "yezemidlalo" ye-rabber noma engeyona yendabuko yeVelcro yakudala. Izicathulo ezinjalo zizokhethwa ukuba zigqoke isithwasahlobo esizayo ngezimfanelo eziyingqayizivele, zokudala kanye nalabo abafisa ukufana nabanye abantu.
Izikhwama Zabafazi Zesitembu
Ihlobo elikhanyayo: khetha izicathulo ezikhululekile kakhulu nezesitayela nge-Econika
Indlela yokukhetha i-quality suede boots
Inkosi yezithende Brian Atwood: izithombe ezibuhlungu zeqoqo lekwindla
Yini okufanele ugqoke amasinki emgodini ekwindla nasentwasahlobo, ebusika nasehlobo: izithombe ezingu-30 zezithombe zangempela zefashini
Amabhuzu ngesitayela sama-cowboys aseMelika
I-veshenok ekhula ekhaya
Amazinyo anempilo namazinyo ngesikhathi sokukhulelwa
Umculo iyinhlangano ye-hormone ewusizo
Inkukhu e-sauce e-multivark
Ukubhula okungcwele koNyaka Omusha omdala
Ukuthuthukisa imidlalo yeminwe yezingane
U-Anastasia Volochkova ugula kakhulu - ababhalisile baye bathola i-ballerina
Isaladi nge-krill inyama